JINGHPAW KASA: လိုင်ဇာမြို့ကောင်းကင်ယံတွင် ဗမာအစိုးရ ဆင်ဖြူတစ်ကောင်ရောက်ရှိနေ
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ တပ်မဟာ (၅) ဌာနချုပ်ဖြစ်သော လိုင်ဇာမြို့ ကောင်းကင်ယံပေါ်တွင် ဗမာအစိုးရ စစ်လေယာဉ်ပေါ်မှ ဆင်ဖြူတော်ရုပ် တစ်ခုကို ယနေ့ ညနေပိုင်း (၃း၀၀) နာရီအချိန်တွင် လာရောက် ချထားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဗမာအစိုးရသည် ကေအိုင်အိုအစိုးရ နှင့် တိုက်ပွဲတွင် ဗမာစစ်တပ်ဘက်မှ အကျအရှုံးများပြာလာမှုကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ယတြာချေ ခြင်းဖြစ်မည်ဟု လိုင်ဇာ ဒေသခံများက ထင်ကြေးပေးကာ ဝေဖန်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Burmese Government fell down big white elephant doll from their military jet fighter on Laiza, Which is KIA (5th) Brigade head quarter at 03:00 PM according to the Laiza civilians report. “It is like the Burmese Government wants to wave that many of their soldiers were died in Kachin battle and follow what the astrologist is suggested them, critiqued Laiza civilian.
က လေး အကွက်
စောက်ရှက်မရှိ ရှုံးမဲမဲပြီး အောက်လမ်းသုံးချင်သေးတယ်။ မမှတ်နဲ့ဦး။ ထာဝရဘုရားသခင် ရိုက်လိမ့်မယ်။ လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ဘာသာရေးပေါင်းစုံ၊ နေထိုင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငါ နိုင်ငံတော်လူကြီးပဲဆိုပြီး လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်ရင် တော့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့၊ အထူးသဖြင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးအားလုံးက နိုင်ငံတော်ကို ယုံကြည်ဖို့ ပိုမိုခက်ခဲသွားပြီ။ ဒါပဲ။
ဒါအကျန်ကုန်လားဆင်ဖြူဆိုတော့အဖြူရောင်ကိုသုံးထားတဲသဘောကအရှူံးပေးပြီဆိုတဲ့အဖြေကိုပေးတာလားယတြာချေတယ်ဆိုရင်တော့sorryပါကချင်ကထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်တာလုံးဝမကြောက်ပါburma army can made very very bests funny jokes.
the last time when they strike our former capital base in the past time they made the same way,elephant from the sky,now they strike our new capital but same way.But this time they did not realize is this war is not only kia,with at least 60%of people live in kachin state is with them,not only kachin.You may ask any people in any place in kachin,in10 6,7,8will ignore burmese army.
funny jokes လုပ်မနေ နဲ့ နင်တို့ KIA ကို ဆင် ဖြူ တော် က ဖင် ချ တော့ မှာ ။ ပြေး ပေါက် ရှာ ထား။ နင် တို့ အဖေ တွေ က မယားငယ် လေး တွေ ခေါ် ပြီး တရုတ် ပြည် ပြေး ပြီ
အဖေရှိလို့တိုက်ဒါထင်လား။အဖေ ပြေးဒါမကလို့ အဖေသေ လဲကချင်ပြည်မှာဗမာမသေမချင်းချမှာဘဲ။
kia အလောင်းတွေ မရေနိုင်ဖူးတဲ့ဟေ့
မအေလိုးလေးတွေ အဲ့ဒီဆင်ဖြူတောင်ကဖင်ချမယ်ဆိုတဲ့အကောင် လာခဲ့စမ်း အေအဲ့ဒီဆင်ဖြူတော်ကိုတော့ဖင်မချခြင်ဘူး တရိတ်ဆန်ဖြစ်နေလို့ ချမယ့်ချ မင့်ဖင်ပဲချမှာ မအေလိုးလေး ရေချိုထား ကြားလား
အဲဒီKIA အလောင်းတွေမရေနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကောင် မင်းကစစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာKIAအလောင်းတွေသွားလိုက်ရေနေတာလား?ဘာလဲအသက်ရှင်ကျန်နေတဲ့KIAတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်ဆိုတာမသိလိုလား?အဲဒီကျန်နေတဲ့KIAက မင်းကိုဖင်ချမလွှတ်လိုက်ဘူးလား ဖင်ချခံရမှာမကြောက်လို့လား
ဒီမှာ မင်းအ မေ ရော အဘွား ရော အဒါ် ညီမ တဆွေ လုံး တမျိုး လုံး က မိန်းမ တွေ ကို ပါးစပ် ရော နှာခေါင်းပေါက် ရော ဖင်ပေါက် ပါ မကျန် အောင် လိုး ပေး နေရ လို့ ရေ မချိုးအား သေး ဘူး ။ ပြီးရင် မင်း အဖေ နဲ့ အဖိုး ကို ပါ ဖင်ဆက် လိုး အုံး မှာ ။ မင်းတော့ ဖင်မချတော့ ဘူး ချီး ပေ မှာ စိုး လို့ ။ အိမ်ကခွေး ကိုပဲ ဖင်ချ ခိုင်းတော့ မယ် ။
ပါစပ်နဲ့တ ယောက်နဲ့တယောက်ပြောနေကြမဲ့အစား ညိမ်းခြမ်းရေအောင် ဘယ်လိုကူညီရမလဲ ပြည် သူတွေကို ဘယ်လိုကူညီနိုင် မလဲအိုတာလေ တွေဆွေးနွေးကြရ အောင်သူငယ်ချင်းတို့
Andrew Kham said...
I I hate mother fucker Burmese. KIA just fight don't be stop. We all are with you.
Hnin Pwint said...
--- ဟားဟား..ရမ်ဘိုဇာတ်ကားကို သရော်ထားတဲ့ ဟာသကားကိုသတိရတယ်.. အဲဒီဇာတ်ကားထဲမှာ ပစ်လိုက်တဲ့သေနတ်ပြောင်းဝမှ ကျည်ဆံမထွက်ဘဲ ရေထွက်လာပါတယ်.. အဲအခု လိုင်ဇာတ၀ိုက်ကို ဂျက်တိုက်လေယာဉ်ပေါ်မှ ဗုံးကြည်ဆံတွေချ လိုက်ပေမယ့် ဆင်ရုပ်ထွက်လာတာနေမှာပါ.. လေယာဉ်မှူးက ဗမာ့တပ်မတော်ကို သရော်လိုက်တာပါ...ဒါမှမဟုတ် ဗုံးဆံတွေကုန်သွားလို့နေမှာ..
ဗေဒင်ဆရာတွေ အုပ်ချုပ်နေသော နိုင်ငံဘယ်တော့မှ မတိုးတက်နိုင်ပါ..
ရှေးမြန်မာဘုရင်တွေလက်ထက်မှာတစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံစစ်ခင်းကြတယ်တဲ့။မြန်မာဘုရင်တွေကစစ်မနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဆင်ဖြူတော်တွေ သမီးတော်တွေဆက်သပြီးပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်ကြတယ်တဲ့။အဲဒီအတိုင်းပဲဆိုရင်တော့ ...kiaတွေမလျှော့နဲ့ဆက်လုပ်...သူတို့ကအရှေ့ကနေအယောင်ပြ နောက်ကနေဓားနဲ့ထိုးနေတာ သတိထား။